आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? - नेपालबहस
आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
| १३:३४:५९ मा प्रकाशित
६ माघ, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासम्ममा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मुनाफा बढेको बढाउन सफल भएको छ । कम्पनीले १० करोड ७८ लाखभन्दा बढी मुनाफा गरेको छ । अधिल्लो वर्ष ६ करोड ८९ लाख मुनाफा गरेको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी अर्व ५४ करोड रहेको छ । कम्पनीको मुनाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुनलामा चालू आवको सोही अवधिमा ५६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको आम्दानी चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
चुक्तापूँजी १ अर्ब ५४ करोड रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा ४८ करोड २४ लाखभन्दा बढी सञ्चित गरेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख जम्मा भएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी १४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १३४ दशमलव ८१ रहेको छ ।
इफ इन्स्योरेन्सको कम्पनीले ६६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डबाट स्वीकृती पाएसँगै कम्पनीले ६६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन पछि पूँजी २ अर्ब २० करोड पुग्नेछ ।
दुई भिन्नाभिन्नै दुर्घटनामा परी दुईको मृत्यु ६ घण्टा पहिले
पूर्वविद्यार्थीले दिन्छन् छात्रवृत्ति १० घण्टा पहिले
कांग्रेस प्रधानमन्त्रीका लागि मरिमेट्दैन : देउवा ७ घण्टा पहिले
राष्ट्र बैंकले दियो ‘डिजी पे’लाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति ११ घण्टा पहिले
जबर्जस्ती करणीका दोषी राई पाँच वर्षपछि प्रहरीको पञ्जामा १४ घण्टा पहिले
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन चैत ७ गते, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने १२ घण्टा पहिले
देशका पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको पूर्वानुमान ५ दिन पहिले
सोमबार सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड ३ दिन पहिले
खेर गएको जमीनबाट करोडौं आम्दानी हुदै ९ घण्टा पहिले
आज उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना ४ दिन पहिले
सभापति देउवाद्वारा डा. उप्रेतीको निधनप्रति दुःख व्यक्त ३ दिन पहिले
सिमसारको संरक्षणमा जुट्न आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ ४ हप्ता पहिले
६ महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च ४ हप्ता पहिले
कम्यूनिष्टबिहीन देश बनाएर कांग्रेसले जनताको सुखदुःखमा साथ दिनुपर्छ : कांग्रेस नेता पाण्डे ५ दिन पहिले
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए राजदूतद्वय रेग्मी र विश्वकर्माले ६ दिन पहिले
अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्याउने प्रस्तावमा सहमति जुटेन ५ दिन पहिले
उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी २ वर्ष पहिले
यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह १ महिना पहिले
सुनिलले केएमसीमा १९९९ र नोबेलमा १५५० रुपैयाँमा पीसीआर थालेपछि मन्त्री ढकाल तनावमा ५ महिना पहिले
मन्त्रालयलाई कति कानून छन् भन्ने थाहा छैन १२ महिना पहिले